Okwamanje akuhambi kahle: Manqoba Mngqithi - Impempe
Okwamanje akuhambi kahle: Manqoba Mngqithi
January 20, 2021 January 20, 2021 Impempe.com
Uvumile ukuthi izinto azihambi kahle ekhempini yeMamelodi Sundowns, uManqoba “TV” Mngqithi, oyinhloko yabaqeqeshi kuleli qembu.
ISundowns ibanjwe yiBloemfontein Celtic ngo 0-0 ekhaya emdlalweni weDStv Premiership ngoLwesibili.
Kulo mdlalo iDowns evikela isicoco, ihluleke yancama ukunqoba eqenjini elifike kubona selidlale amahlandla ayisithupha kodwa lutho iwini.
Bekuqala ngqa kule sizini ukuthi iSundowns idlale kuze kuphele imidlalo emibili ingalishayile igoli,ingayitholi iwini.
Lokhu kungawini kwenzekile nangoMgqibelo iDowns icazelana amaphuzu neSuperSport United.
Lowo mphumela uyimisa kabi iSundowns esaqhwakele kodwa okushaya kakhulu uMngqithi ukuthi bahluleke ukunqoba bebhekene neqembu elingcono ngamaphuzu amathathu kuphela kwiTS Galaxy esemsileni.
“Ubunzima lo mdlalo, kakhulu futhi. Amathuba okuzenzela izinto zibe lula siwatholile kodwa asizange siwasebenzise. Lokho kungicacisele umdlalo usaqala ukuthi sizoba nenkinga,” kusho uMngqithi.
“Ijubane labo belisiphushela emuva obekwenza ukuthi yonke into ebisifuna ukuyenza siyiqale emuva.
“Esiwombeni sesibili kuthe ukuba ngconywana ngoba kukhona esikwenzile esiswini kwaba yithina manje inkinga kubona.
“Kunezikhathi lapho bebengethusa khona ngamathuba abebewathola uma sikade sihlaselile. Amathuba awele kuKermit (Erasmus) esiwombeni sokuqala nesesibili kube yibhadi nje ukuthi kungangeni nelilodwa,” kusho lo mqeqeshi othe iCeltic ibivele izele iphuzu kulo mdlalo.
Kumenza ame ngamanzonzwane ukuthi bazobhekana neSwallows FC ngoMgqibelo.
“Sinomdlalo onzima neSwallows esemhlane kithina. Mhlawumbe sidinga umdlalo onjalo ukuze izinto zizohlangana ngoba okwamanje akuhambi kahle,” kusonga lo mqeqeshi okhombise ukungayijabuleli indaba yokuthi banqobe i-Q1.
Previous Previous post: UMaduka akafuni ukwanda kakhulu ngegoli eliphikiwe
Next Next post: Ubona ubungozi kwiPirates ebuya esibhaxwini esinzima uNcikazi we-Arrows